Yangu Blogging Yekutarisa ... | Martech Zone
Muvhuro, March 10, 2008 Svondo, Kubvumbi 24, 2016 Douglas Karr
Vhiki rapfuura ndainwa kofi naBrandon McGee, VP neHuntington bank iyo inoshanda Mobile Banking. Brandon's blog ine yakanakisa yekutsvaga injini chinzvimbo - nekutenda kune ake akaomeswa zvemukati pamwe neyakaomesesa niche yaari kubloga nezvayo.
Takataura nezvebhurogu yake uye tikatotaura nharembozha kwechinguva, akandipa imwe nzwisiso inotonhorera nezve indasitiri irikuenda uye zvinonakidza. Heino chirevo chehurukuro yedu - ini ndaida kuigovana nemunhu wese.
Niche, niche, niche... micro, micro, micro. Ndine godo nesarudzo yaBrandon mukubloga. Ini ndanga ndagara ndichingokanda mambure akapamhama aindiwanisa imwe hove; asi chokwadi chakapesana. Nekuti ini handina yakasimba niche, ndinokwikwidza nemamwe akawanda masayiti. Brandon haafanire kukwikwidza (zvakadaro). Kune avo vaunofunga nezve blogging, pane ruzha rukuru kunze uko saka edza kutsvaga yako yakawandisa!
Kusarudza zita renzvimbo. Brandon parizvino inogarwa neBlogger. Apa ndipo pane iyo 'yet' inosvika mukutarisa mune yangu yapfuura poindi. Kana mumwe munhu akafunga kubloga nezve mobile banking uye ivo vakabata rakakura zita rezita, Brandon anogona kusundidzirwa pasi Yekutsvaga Injini peji peji sevamwe vanhu vachisimuka vane yakanangwa mazita emadomeni.
Yakaitirwa vs. kuitisa. Sarudzo yaBrandon muBlogger yaive yakanaka kumusimudza nekumhanya. Ane niche yake uye anogara achibloga pazvinhu zvikuru. Iyo blog ndeyechokwadi inokunda uye iri kumukurudzira iye vamwe kutariswa. Nekudaro, ini handifunge kuti zviri kumukurudzira zvakawanda kutarisisa sezvaigona kuve kana aizozvitambira iye pachake Kubata papuratifomu senge WordPress kuchamubvumidza kuti aratidze marongero ake, aite zvakadzama injini yekutsvaga, uyezve 'ive' vateereri vachienda kunzvimbo yake (pane zvinokanganisa zveBlogger).
Heino mumwe muenzaniso wandakapa Brandon, maratidziro ake emukati anoratidzwa mu SERP. Kana iwe ukatarisa kuti ayo maposvo uye zvinongedzo zvakarongedzwa uye zvinoratidzwa muGoogle, pane chakakosha chinhu chisipo:
Cherekedza dzese tsananguro dze posvo? Hazvina kumanikidza, handizvo here? Iine WordPress, plugin yakadai seiyo Zvose muna One SEO Pack inokutendera iwe kugadzirisa zvirevo zvinoenderana nehukama hwako muGoogle. Izvi zvinokutendera kuti unyore zvimwe zvakanangwa, kiyi-yakapfuma, uye zvinomanikidza zvemukati izvo zvinotyaira kuwanda kudzvanya kuburikidza newebsite yako.
Izvi ndizvo zvinoita maratidziro angu.
Ini handisi kuzivisa kuva chero guru reSEO, asi kugona kushandura zvirimo zvinoratidzwa mukati meKutsvaga Injini mhedzisiro yakakosha - zvese injini dzekutsvaga, uye kune vanhu vanozvishandisa.
Sezvo ecommerce uye kubhengi kuchigovana zvimwe zvakafanana kutevedzera nyaya uye zvinoita kunge kuri kuchinja kune nhare, ndiri kutarisira kumbopinda muBrandon's blog zvakadzama zvishoma. Akatondinongedzera kune mamwe makuru indasitiri zviwanikwa
Tags: blog blogBrandon McGeemisoro yezvinyorwainotongwa zitahosting versus hostedHuntington bhangimobile bankingnichenyoka
Dzidzo Ndiyo Mhinduro Here?
Peji Rako Rokuzvinyora Rinoita Sezvizvi?
Mar 10, 2008 pa 3: 50 PM
Kunyange ini ndichibvumirana niche ndiyo nzira yekuenda, kubva pakuona kwekutanga blog ndinofunga zvine njodzi.
Ndingadai ndoda kukanda mambure angu zvishoma paupamhi ndobva ndadzikisa iyo pasi blog yangu ichienderera… kuveza yangu niche. Senzira yakachengeteka yekubudirira.
Mar 10, 2008 pa 4: 43 PM
Dai ndaigona kuzviita zvese pamusoro, ini ndaizove nemana kusvika kumatanhatu mablog - rimwe riine nzvimbo yega yega yemusoro wenyaya. Ini ndinofunga vanhu vanotenga zvekudya nenzira yavanotenga nayo zvigadzirwa ... havabate bhegi rakasanganiswa, vanobata bhegi ravanoda. 🙂
Izvi zvaizonditendera kuti ndinyatso tarisa zvemukati pamwe nekuyambuka-kusimudzira masosi Dambudziko rekuenda nemambure akapamhamha nderekuti urikunyatsoshanda uchipesana nezvose niches zvatove kunze uko. Ini handifunge kuti urikupa zvemukati zvako mukana wakanaka.
Mar 11, 2008 pa 12: 35 PM
Hongu, chaizvo ndinoona maonero ako. Uye kunyange zvichizonyanya kuoma kuvaka kumberi, zvinopa mubhadharo uri nani mukufamba kwenguva. (Kunge chero chinhu chaizvo)
Mar 13, 2008 pa 4: 01 AM
Kutenda nechirangaridzo cheZvese muOne SEO Pack - Ini ndinofungidzira kuti ini ndinonyora kopi muChikamu Chechinyorwa kubva pambiru iri pasi peMataki?
Zvakanakisisa kubva kuEngland!
Mar 13, 2008 pa 10: 18 AM
Kutenda (kubva kudivi redziva),
Mar 13, 2008 pa 10: 25 AM
Ndatenda Doug! 🙂
Ndinovimba zvese zvakanaka newe. Ndakakuverengera Blog kwechinguva ikozvino uye ndozviona zvichibatsira, saka ndatenda!
Mar 13, 2008 pa 1: 54 PM
Ndinoonga chaizvo mazwi emutsa, Jon! Ndanga ndiri murume akabatikana nguva pfupi yadarika saka mhinduro senge isosi huru yesimba.
May 2, 2008 pa 10: 10 PM
Ndingafarire kutora chikwereti, asi yangu Seesmic plugin iri chaizvo Sidebar plugin kuratidza ako ekupedzisira mavhidhiyo. Ini ndinobvuma - ndiani akambonyora iyo Seesmic comments plugin inyanzvi!
Yakakura, inoteedzana chinyorwa.
Ini ndiri mutsva mukublogi uye ndakango chinja kune yega-inoitirwa WordPress theme inonzi Suffusion ine ZVESE MUMWE MUMWE yakavakirwa mairi. Zvikuru.
Zvakare ndatenda nezvakatumirwa.